Rooftop Yakavharwa Mhepo Inodzora
Holtop Modular Mhepo Yakatonhora C ...
Rooftop Yakavharwa Mhepo Condit ...
Single Kamuri Wall vakatasva Du ...
Airwoods Ceiling Mhepo Inonatsa
Yakabatanidzwa Mhepo Kubata Units
Rooftop yakarongedzwa mweya unotora inotora indasitiri-inotungamira R410A scroll compressor ine yakagadzikana mashandiro mashandiro, iyo package unit inogona kuiswa munzvimbo dzakasiyana siyana, senge njanji yekufambisa, maindasitiri zvirimwa, nezvimwe. Holtop padenga remapaketi emhepo conditioner ndiyo sarudzo yako yakanaka kune chero nzvimbo panoda ruzha rwemukati meimba uye yakaderera yekuisa mutengo.
Tumira neindaneti kwatiri Peji PDF Download
Catalog: Holtop Rooftop Yakapakisirwa Mhepo Inodzora
Holtop padenga rakaputirwa mweya unodziya ndiyo yepakati saizi AC michina inosanganisa mashandiro eHVAC (kutonhora, kupisa uye kufefetedza mweya nezvimwewo.) Uye ine zvese zvikamu zvecompressor, evaporator, condenser uye mavhavha nezvimwe muchikamu chimwe. Holtop padenga rakaiswa mukati mhepo yekuisa mweya inowanzo gadzirirwa padenga padenga mune zvekushambadzira maficha.
Eco-inoshamwaridzika: Eco-inoshamwaridzika mhando R410A firiji, shoma firiji jekiseni vhoriyamu.
Yakagadzikana uye Yakavimbika: Compressor inogadzirwa neyekupisa-inodzivirira zvinhu, zvipenga zvikamu zvinounza kubva kune epasirese zvigadzirwa, chimiro chakasimba uye kuita kwakavimbika.
Yakapakirwa uye Yakagadzirwa Dhizaini: Yakabatanidzwa neyemukati unit uye yekunze unit kudzikisa chirongwa chekudyara, kupfupisa yekumisikidza nguva, chengetedza nzvimbo yekumisikidza uye nyore kugadzirisa mukuita kwezuva nezuva.
1.Nyore Sisitimu, Lower Investment:
Holtop padenga remapaketi yemhepo inogadzirisa haibvunze iyo inotonhorera kana inotonhorera sisitimu yemvura, iyo inogona kuponesa mutengo wekutenderera pombi, kutonhora shongwe, uye zvimwe zvinoshandiswa zvinoshandiswa kune ino system, nekudaro kudzikisa huwandu hwekudyara nekugadzirisa mutengo paHVAC system kusvika padanho rakakura. .
2.Compact Dhizaini, Nyore uye Flexible Kuisirwa, Yakadzika tsoka
Zvinodiwa nemushandisi pakuisa zvinofungidzirwa zvizere. Chikwata ichi chinogamuchirwa chiumbwe dhizaini inosangana neyemukati yuniti uye yekunze condenser zvikamu kuitira kuti parege kuve neakawedzera firiji fekitori yekubatanidza uye yekumonera mabasa panzvimbo, uye Zvakachengeteka uye zviri nyore kuendesa nekuisa.
Holtop padenga rakaiswa mukati mhepo yekuisa mhepo inogona kuiswa panze pasi kana padenga padenga, hapana chinodikanwa chemuchina kamuri kana yemukati nzvimbo yekugara iyo package unit.
Iwo chete mashoma anoshandira simba cabling, kudzora wiring, kudhiraivha anodikanwa pamberi pehurongwa hwekushanda
3. Corrosion Resistance, Yakanaka Mamiriro Ekunze Mamiriro Ekuita
Iyo yunifomu yezvivakwa zvikamu hupfu hwakaputirwa neanti-corrosion. Yakakwira-simba thermal-insulated furemu, maviri-ganda PU sangweji pani, uye mamiriro ekunze-chiratidzo dhizaini kunyanya kune yekunze kumisikidza, izvo zvese zviri kuona kwayo yakanakisa inoenderana kune akasiyana emamiriro ekunze mamiriro munzvimbo dzakasiyana.
4. Wide Temperature Range Kushanda
Yakanakira modhi inokwanisa kushanda nemamiriro ekunze tembiricha yakakwira kusvika pa43 ° C, uye zvakare inowanikwa kana ichingova 15 ° C, kugutsa yakakosha kutonhora kudiwa mune mamwe maitiro ekushandisa. Kuchenesa kunowanikwa kunyangwe iyo yekunze tembiricha yakaderera se -10 ° C.
5. Kugadziriswa KweProjekti
Holtop padenga remukati yakarongedzwa air conditioner maratidziro uye zvikamu zvinoshanda zvinogona kugadzirwa uye kugadzirwa zvinoenderana nechero chirongwa. Semuenzaniso, kumanikidza kwekunze kwekunze kunowanikwa kune-marefu-kuremedza kufefetedza mweya kuti uve nemhepo yakakwana kukamuri yega yega yekona; zvikamu zvekuzvisarudzira zvinogona kuve zvakagadzirirwa kugutsa zvinodiwa nemutengi uye kugadzira mamiriro emamiriro ekunze emamiriro ekunze.
Pashure: Imwe Kamuri Kamuri Yakakwira Ductless Heat Energy Kudzorera Ventilator
Zvadaro: Holtop Modular Mhepo Yakatonhora Chiller NePombi Yekupisa
Mhepo Inodzora Chikamu Chekutengesa
Commercial Rooftop Mhepo Inodzora Kutengesa
GMV5 HR Yakawanda-VRF
Yese DC Inverter VRF Yemamiriro Ekumesa System
In-Rack Precision Mhepo Inodzora (Batanidza-Cloud S ...
In-Row Precision Mhepo Inodzora (Batanidza-Kutinhira ...
In-Kamuri Precision Mhepo Inodzora (Batanidza-Mhepo Se ...